Famakafakana tranonkala Semalt
Ny fahazoana ny tranonkalanao mahatratra ny tanjany feno dia tsy mora toa izay mety ho henony. Ary mino aho fa mety efa nahatsapa izany ianao izao. Mitaky fanaraha-maso, fanakorontanana ary famakafakana lalandava izany mba hahazoana antoka fa manao zavatra amin'ny fomba tsara ianao. Imbetsaka ny famerenana toy izany dia tsara kokoa rehefa vita ny matihanina izay manana traikefa mahalala izay tokony hikaroka ao amin'ny tranonkalanao. Amin'ny maha mpandraharaha anao, izahay dia mino fa mino ianao fa tsara kokoa ny manao zavatra ho an'ny tenanao. Na izany aza, tsy misy nosy iray. Mba hahatsapanao tsara kokoa, miaraka amin'ny Semalt, fantatrao ireo dingana rehetra ataontsika amin'ny fampivoarana ny tranonkalanao.
Ka aza mieritreritra izany rehefa mametraka ny tranokalanao amin'ny fifehezantsika ianao fa aleo izany ho fiaraha-miasa. Amin'izany fomba izany, azontsika atao tsara ny mamindra ny fahitanao amin'ny tranokalanao ary hiantohana ny fihenan'ny zavamananainao.
Mba hahafantaranao ny fototry ny optimization SEO dia manolo-kevitra anao handinika ny tranokalanay ianao mba hahalalanao bebe kokoa. Betsaka ny votoatin'ny fampianarana hanampiana anao hahafantatra ny fomba azonay manampy anao.
Eto, miresaka ny fitaovana rehetra ilaina amin'ny famakafakana feno ny tranonkala isika. Tsy tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fifaninanana ataonao. Mahita ny fampiasana teny fanalahidy ao amin'ny tranonkalanao ary misy ihany koa ny teny fanalahidy. Mandeha lavitra izahay hampisehoana aminao ny pejy fitateranao fifamoivoizana (ity ny pejy izay notsidihan'ny ankamaroan'ny olona) ary mamaritra ny toerana misy anao amin'ny valin'ny fikarohana ara-boajanahary izahay.
Rehefa mandinika ny fifaninanana ataonao ianao dia mamantatra ny zavatra tsy ampy anao. Ny fandinihana ny metaly fifaninanana dia ahafahantsika mahafantatra ny antony ao ambadiky ny fitomboan'ny fifamoivoizana. Avy eo ampiharinay amin'ny tranokalanao ity fahalalana ity.
Izahay dia mirehareha amin'ny fanazavanay sy handrava zavatra mba hahafahanao manampy anao. Tsy tianay ny fomba fijeriko hoe "Izaho mijery ianao." Fa kosa, ataontsika ho fiaraha-miasa izany. Amin'izany fomba izany, samy mampifangaro ny simika ao amin'ny laboratoara simika isika "amin'ny fomba", ary tsy avelanay ho an'ny mpianatra briny ny zavatra mahafinaritra rehetra.
Amin'ny alàlan'ny famaritana, ny SERP dia mitoetra ao amin'ny Pejy fikarohana valin'ny fikarohana. Ireo dia pejy naseho amin'ny milina fikarohana rehefa misy mpampiasa na amin'ny tranga Semalt mitaky azy. Ny tanjona voalohany amin'ity vokatra ity dia ny ahafantarana ny fomba mahomby amin'ny tenimiafina ao amin'ny tranonkalanao.
SERP dia karatry ny tatitra momba ny tranonkalanao. Ahitana lohateny, rohy mankany amin'ny pejin-tranonkalanao, sy famaritana fohy. Ity famaritana ity dia mampiseho hoe aiza no misy ny teny fanalahidy mifanentana amin'ny atiny. Ny dikan'izany dia hoe tsy afaka manana tranonkala momba ny fivarotana fiara ianao, ary ny teny fanalahidy dia Fishes, Ocean, Aquarium, sns. Iza ireo teny fanalahidy azonao ampiasaina dia tokony hifanaraka amin'ny tolotra omenao. Raha tsy izany dia manohy misintona mpihaino diso ny tranokalanao.
Noho ny antsipiriany ao amin'ity tatitra ity dia matetika izy io amin'ny pejy maromaro. Na dia azonao atao ny mametra ny zavatra aseho, aleontsika ny hiditra feno, amin'ny alàlan'ny fiampitana ny T rehetra sy ny teboka ny I.
Raha jerena io valiny io, ny pejy voalohany dia manana fampahalalana mifanentana indrindra. Rehefa mandroso amin'ny faran'ny tatitra ianao dia mihena ny fahazoana angon-drakitra ao anatiny ary mandra-pitadidy ny sainao tsy hanohy intsony. Tahaka ny dokam-barotra na amin'ny zavatra rehetra amin'ny fiainana, ny zavatra lehibe indrindra no ho tonga voalohany.
Farany, ny SERP dia mampiseho anao ny toerana raisin'ny tranonkalanao ao amin'ny efitranon'ireo tranonkala. Ary satria mamorona mitarika amin'ny fampiasana ireo teny fanatanjahan-tena ianao, dia azonao ny zavatra diso sy tokony hamboarina. Ny fahafantarantsika izay tsy mety dia fantatsika hoe aiza no tokony hiasa.
Misy singa efatra amin'ny SERP. Manana dokam-pikarohana karama sy valim-pikarohana ara-boajanahary ary valim-pikarohana eo an-toerana izahay ary valiny mifandray.
Doka fitadiavana karama: fomba iray hahazoana ny fifamoivoizana an-tavy. Eto, aloao ny Google handroso ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny fisintonana ny mason'ireo mpijery azy. Amin'izany fomba izany, mahita ny hevitra ny tranokalanao saingy tsy hoe mitondra anao foana io. Ary, tsy misy antoka hoe rehefa mijanona mandoa vola an'ireny doka ireny ianao, dia hanana fifamoivoizana avo be amin'ny tranokalanao.
Voka-pikarohana momba ny organika: io no nanoratan'i Semalt an'izany. Izany dia rehefa mampiasa SEO ianao hisarihana ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao amin'ny fomba voajanahary. Ny valin'ny fikarohana momba ny organika dia raisina ho azo itokisana. Miaraka amin'ny fampiasana matihanina SEO, ny giginao dia matetika mipetraka eo amin'ny tampon'ny pejy ambony Google. Izany dia manome vahana kokoa ny tranokalanao hamadika ireo tsitoka ireo amin'ny mpanjifa.
Voka-pikarohana eo an-toerana: eto, mahita lisitra, sarintany, ary fifandraisana ho an'ny orinasa ao anaty radius fikarohana ianao. Ny radius fikarohana dia voafaritry ny fepetra sy ny filan'ny mpampiasa azy. Izany no antony maha-zava-dehibe ny oram-pananganana orinasa ao anatin'ny pejin'ny orinasa Google.
Fikarohana mifandraika: Hita matetika matetika ny fikarohana mifandraika amin'izany. Ireo dia boaty kely izay hitanao eo amin'ny faran'ny pejin'ny valiny rehefa avy nikaroka na inona na inona ianao. Ireo dia natsangana miankina amin'ny teny fanalahidy nampiasain'ny mpampiasa tao amin'ny boaty fikarohana.
Na izany aza, ny SERP an'ireo milina fikarohana lehibe toa an'i Google, Bing, ary Yahoo dia mety hampiditra endri-javatra vokarina fitomboana maromaro. Ahitana singa toa ny kalitaon'ny snippet, sary, sarintany, boaty valin'ny famaritana, sns.
Fantatra ihany koa fa ny tady fitadiavan'ny mpampiasa, ity no teny na kofehy fitenin'ny teny nampidirina ao anaty boaty fikarohana. Fantatrao ve ny fomba ahazoanao mikaroka na inona na inona amin'ny Google? Eny, misy fomba maromaro azon'ny mpampiasa tadiavina, saingy mbola voatahiry ny teny fanalahidy.
Fa raha ny milina fikarohana dia miankina amin'ny karazana fampiasan'ny mpampiasa azy irery, tranonkala maro no tsy hahita ny hazavan'ny andro mihitsy. Noho izany, ny milina fikarohana dia manova ny algorithm ary ny hakingan-tsaina amin'ny search engine.
Tsy azo atao intsony izay valin'ny fikarohana eo am-pitadiavana izay tadiavin'ny mpampiasa iray. Fa kosa, orinasa toa ny Google factor amin'ny variable hafa. Rehefa nandeha ny fotoana dia nitombo ihany ny toe-javatra manodidina ny teny mifanaraka amin'ny fisainana manan-tsaina. Amin'ity fomba ity, ahitsy ny teny diso, ary aseho koa ireo teny fanalahidy.
Ny atiny dia maneho aminao ny fomba nitondran'i Google ny tranokalanao. Mieritreritra ve izy io fa loharanom-pahalalana manokana na tsia? Eto, azonao atao ny manamarina ny isan-jaton'ny hoe ny mampiavaka ny atiny. Samy te-ho manokana na hafa rehetra, ary manampy antsika hahatratra izany endri-javatra izany. Ny votoatiny dia ahitanao hoe inona ny ampahany ao amin'ny soratrao no ariana, ary azonao atao ny mijery ny loharano voalohany.
Tsy misy ny nosy iray, ka manantena hahita hadisoana kely. Anjarantsika ny manamboatra ny lahatsoratrao ho miavaka sy manokana araka izay azo atao. Na dia manangona angon-drakitra amin'ny loharano hafa aza ianao dia mila manao azy ho anao manokana, ampio kely ny tenanao sy ny orinasanao. Ity dia mandeha lavitra amin'ny fanampiana ny mpamaky anao hifandray tsara amin'ny orinasa sy ny marika.
Miaraka amin'ny mpampiasa interface tsara anay, afaka mitantana tranonkala marobe isika. Amin'ny alàlan'ny fandefasana ny domesinao na URL anao amin'ny Google, dia azontsika atao ny mizotra mora foana ny asan'izy ireo. Miaraka amin'ny Google webmaster, manana ny fitaovana rehetra ilainao ianao hanara-maso sy hanatsarana ny tranokalanao. Ho mankafy ny serivisy an'ny webmaster Google dia mila manamboatra kaonty ianao aloha. Google webmaster dia fitaovana ilaina amin'ny fahombiazan'ny tranonkala rehetra. Mandeha lavitra izany raha hampiseho aminao ny fanaon'ny tranokalanao amin'ny telefaona sy takelaka, jereo ireo tranokala hafa mifandraika amin'ny anao ary manombatombana ireo fanontanianao.
Ahoana no ahafahan'ny webmaster Google manara-maso ny tontolon'ny tranonkalanao?
Manamarina izany fa afaka mahazo ny atiny ao amin'ny tranonkalanao ny Google
Izany dia ahafahanao manampy sy manala ireo pejy ao amin'ny tranonkalanao
Manampy anao handinika ny tranokalanao izany ary hahita fomba hanomezana traikefa tsara ho an'ireo mpamaky anao.
Azonao atao ny mitazona ny tranokalanao tsy manelingelina ny fisiany ao amin'ny valin'ny fikarohana.
Azonao atao ny mahita sy manafoana ny olana amin'ny malware na spam izay mety ho niampatrana teo amin'ireo lozabe raha tadiavina amin'ny fomba hafa.
Google webmaster dia fitaovana ilaina rehefa manadihady tranokala. Maneho antsika ny toerana tokony hatao sy izay tokony hatao.
Ity dia manadihady ny hafainganana ny pejin-tranonkalanao. Google dia mampiasa ity famakafakana ity mba hamaritana raha mahafeno ny takian'ny Google ny pejinao na ny tranonkalanao. Eto dia ho aseho anao koa ny lesoka efa ilainao hanamboarana ny tranokalanao sy ny fomba fanatsarana amin'ny ankapobeny ny tranonkalanao.
Matetika ianao dia aleonao tranokala iray izay mitondra haingana kokoa ny pejy. Na inona na inona mihoatra ny 10 segondra dia manomboka mahatsapa toy ny andro iray manontolo. Izany no antony mahatonga ny tranokala haingana haingana dia tsara ho anao sy ny mpijery anao. Tian'i Google ho faly ny mpampiasa azy, izany hoe mila tranonkala haingana izy ireo. Ka ny tranonkalanao dia mila haingana araka izay azo atao ho an'ny Google manakatra ny tranokalanao. Ary ilainay izany mba hisehoan'ny tranokalanao ao amin'ny fikarohana ambony indrindra, ary hanomezana vahana kokoa ny asa aman-draharahanao.